के जति पढे पनि याद नै हुँदैन ? यस्तो गर्नुहोस् !! | सुदुरपश्चिम खबर
सबैले भन्ने गर्छन् पढ्न त कसलाई मन हुँदैन र तर जति पढे पनि याद नै हुँदैन। यदि पढेको याद हुँदैन भने वास्तुशास्त्र अनुसार अगाडि बढ्नुहोस्।वास्तु शास्त्रले विभिन्न दिशावाट प्राप्त हुने ऊर्जाका आधारमा कुनै पनि वस्तुको प्रयोग कसरी गर्दा फाइदा पुग्छ भन्ने जानकारी दिन्छ।
अध्ययन कक्षाका लागि उपर्युक्त दिशा ईशान (पूर्व—उत्तर) दिशा उत्तम हुन्छ। यी दिशाहरु एकाग्रता बढाउने दिशा मानिन्छ। —अध्ययन गर्ने टेबल आकारमा वर्गाकार या आयातकार हुनु पर्छ। टेबुलको आकार निकै ठूलो अथवा धेरै सानो पनि हुनु हँुदैन। टेबल पुस्तकहरुले भरिएको हुनु हुँदैन।
— अध्ययन कक्षका भित्ताको रंग हल्का निलो, घिउ रंग, सेतो या हल्का हरियो राख्न सकिन्छ। —अध्ययन कक्षमा नै सुत्ने व्यवस्था हुनु पर्छ। टेबल—लेम्प अध्ययन टेबलको दक्षिण—९पूर्व दिशामा हुनु उपर्युक्त हुन्छ। टेबलमा प्रकाश देब्रेपट्टीबाट आउने गरी व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ।
— किताब राखिने अलमारी, दराज आदि अध्ययन कक्षको पूर्व, उत्तर अथवा उत्तर—पूर्व दिशामा राखिनु पर्छ। अध्ययन कक्षको उत्तर—पश्चिम दिशामा नराख्नु नै उचित हुन्छ। (gnewsnepal बाट सभार)